SERASERA, TENY MALAGASY: 21/02/11 - rov@higa
21 Février 2011, 23:14pm
Tsy tonga i Dada : Diso fanantenana ny mpomba !
Tsy tonga indray i Dada ! Izay no feo nanakoako teny Ivato ny Sabotsy teo. Tsy vitsy tamin'ireo vahoaka maro be tonga teny no diso fanantenana tanteraka tamin'ny tsy fahatongavan'ity vahiny efa nandrasana mafy ity.
Nisy ireo nanome tsiny ny mpitondra noho ny fanakanana sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra. Ao koa ireo nilaza fa efa nampoizina ihany ny tsy fahatongavan'i Dada, saingy vokatry ny laza masaka nataon'ireo mpanaradia azy tamin'ny alalan'ny gazety sy ny haino aman-jery, sodoka ihany izy ireo, ary izao nody maina izao.
Nisy tamin'ireo mpikambana ao amin'ny tetezamita no nanao sangisangy zary tenany hoe: "mbola nampitomboina aloha ny fetr’andro hipetrahan'i Dada any Afrika Antsimo, satria mety misy hilany fialantsasatra kely mialohan'ny tena hiatrehany ady mafy".
Na izany aza, misy dikany ireny fahamaroan'ny olona tonga nitsena ny … (Suivre le lien)
Ankolafy telo Nanamafy ny firaisankinany
Ambohipihaonan’ny Ankolafy telo teny Ivato ny sabotsy 19 febroary teo, andro voatondro ary nantenain’izao tontolo izao, fa hiverenan’ny filoha voafidim-bahoaka, Ravalomanana Marc an-tanindrazana. Tazana teny Ivato avokoa ireo mpitarika ny ankolafy isany, Ravalomanana, nahitana an’i Mamy Rakotoarivelo, Manandafy Rakotonirina, Rolland Ravatomanga, ny ankolafy Zafy, izay izy tenany mihitsy no tonga teny Ivato nitarika delegasiona niaraka tamin-dry Dr Emmanuel Rakotovahiny. Ity farany izay nampahatsiahy fa tsy hay tohaina ny hetsi-bahoaka rehefa hitroatra izy, toy ny tamin’ny 1971, 1991. Tazana teny Ivato ihany koa Rtoa Ramisandrazana nitarika ny avy Amin’ny ankolafy Ratsiraka. Na tsy tonga aza ilay nandrasana, noho ny sakantsakana tamin’ny fomba samihafa nataon’ny FAT, dia vao mainka nanamafy ny firaisankinan’ny Ankolafy telo ny zava-nitranga tamin’ny sabotsy iny.
Nosakanana i Dada Hitsefotra koa ilay sori-dalana
Sahiran-tsaina ankehitriny ny fianakaviambe iraisam-pirenena teo anatrehan’ny nanakanan’ny FAT tamin’ny fomba rehetra ny filoha Ravalomanana tsy hiverina eto Madagasikara.
Mazava fa dia hisy fiantraikany amin’ny famitana ilay sori-dalana heverina hamahana ny krizy ary koa hirosoana any amin’ny fifidianana iny. Ny tsy fahatongavan’Atoa Marc Ravalomanana eto mantsy dia mitarika tsy fandraisan’anjaran’ny ankolafy tarihiny amin’izay fandrafetana na fanadiovana ny sori-dalana natolotr’i Joaquim Chissano ny 16 febroary teo. Manana andraikitra amin’izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena, ao anatin’izany ny Firaisambe Afrikanina. Ity farany izay vao nanamafy ny sazy isam-batan’olona mihatra amin’ireo mpitondra FAT, nandritra ny fivoriambeny faha-31 tany Addis Abeba ny 31 janoary teo.
Manana andraikitra, araka izany, ny fianakaviambe iraisam-pirenena hamaha io sakana tsy ahafahan’ny filoha Ravalomanana hiverina eto io. Re rahateo mantsy fa tsy … (Suivre le lien)
Misy ny fanehoan-kevitra mivantana taorian’ny zava-niseho teny Ivato tamin’ny sabotsy ireny nataona mpanao politika vitsivitsy nangonin’ny gazety Tia Tanindrazana.
Misy hafatra ao anatin’ireny hetsika ireny
“Ireny ampaham-bahoaka hita teny Ivato ireny dia midika fa misy hetahetam-po ao, misy hafatra tokony horaisin’ny mpitondra”, hoy ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita sady filohan’ny vaomieran’ny fampihavanam-pirenena, Jaona Ralison. “Na izany na tsy izany, ny zava-dehibe mahamaika antsika izao dia ny fivoahana amin’ny krizy. Efa misy ny sori-dalana narafitry ny SADC izay midika fa handray andraikitra ny Iraisam-pirenena. Midika izay fa manomboka amin’ny tena famahana ny krizy isika. Ireo trangan-javatra rehetra ireo mitambatra no ezahina horaisina ao amin’ny tetezamita ka hanarenana ny lesoka ary hanohizana ny tsara ka hananganana ny rafitra rehetra hoentina any amin’ny Repoblika faha-4. Isika rehetra dia samy Malagasy ka ny fiainana ao anatin’ny filaminana tanteraka no ahazoana miditra any amin’ny fampandrosoana ny firenena», hoy i Jaona Ralison.
Henri Le Cacheur
Mandiso fanantenana ny rehetra ny fanakanana natao
“Amiko, rariny sy hitsiny raha tonga nitsena an-dRavalomanana ireo mpanohana azy”, hoy i Henri Le Cacheur, filohan’ny antoko PFM. “Nandiso fanantenana ny rehetra ny fanakanana azy ny tsy fahatongavany na ny tsy famelana azy hiditra eto Madagasikara”, hoy izy satria samy niandry azy daholo na ny mpomba azy maniry ny hiverenany eo amin’ny fitondrana na ny mpitondra milaza fa hitsara azy noho ny zava-bitany teto amin’ny firenena. Mbola haveriko fa tsy tokony ho nosakantsakanana mihitsy izy fa navela niverina malalaka”. “Ny andrasantsika izao dia ny hevitry ny iraisam-pirenena ary mikasika ilay sori-dalan’ny SADC iny dia mbola tokony hasiam-panitsiana izy iny fa misy tsy mifanaraka amin’ny hevitry ny mpomba ny fitondrana ary misy koa tsy mifanaraka amin’ny hevitry ny ankilany”.
Manome toky izahay fa tsy maintsy miverina izy
«Voalohany dia misaotra ny vahoaka rehetra tsy an-kanavaka tonga teny Ivato nampiseho firaisankina sy fitiavan-tanindrazana», hoy ny Depiote Zafilahy Stanislas mpitari-tolona eny amin’ny kianjan’i Magro Behoririka. «Nampiseho ihany koa ho hitan’izao tontolo izao fa ny vahoaka malagasy dia manantena ny hiverenan’ny ara-dalàna eto amin’ny tanindrazany. Singaniko manokana ny avy any amin’ny Faritra tena nampiseho izany firaisankina izany ary manome toky izahay fa tsy maintsy ho avy eto ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana ary tsy maintsy ho afaka hirotsaka hofidiana mba hanavotra ity firenena izay efa tena latsaka anaty lavaka lalina ity». «Hitondra voka-dehibe amin’ny famahana ny olana atsy ho atsy iny trangan-javatra iny», hoy izy, «ary ny hafatra ho an’ny ao amin’ny fitondrana FAT : tanindrazana iombonana ity, samy Malagasy isika. Voaporofon’ny vahoaka teny Ivato fa ilaina ny fihavanana sy ny fifamelana ka ampandefero ny hambom-po tsy hitondra vokatsoa ho antsika. Avelao hiverina avokoa ireo rehetra mbola any ivelany noho ny resaka politika mba hiara-kanavotra miaraka ity firenena iombonana ity».
Guy Rivo Randrianarisoa Tsy kilalao ny fiainam-pirenena
Maneho ny heviny tamin’ny tsy nahatanterahan’ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana teto Madagasikara i Guy Rivo Randrianarisoa, mpitondra tenin’ny ankolafy Ravalomanana. Tamin’ny resaka nifanaovana taminy no nilazany fa “rehefa nilaza izahay fa hody dia hody tokoa. Norahonana hoe midira raha lehilahy kanefa dia nosakanana hatramin’ny farany. Izahay anefa tonga hiresaka am-panajana hamahana ny olana. Naleon’ny mpitondra HAT nanokatra ny varavaran’i Madagasikara miaraka amin’ny karipetra mena amin’ingahy ministra frantsay momba ny fiaraha-miasa Henri de Raincourt”. Tamin’izay koa no … (Suivre le lien)
SORI-DALANA FARANY: Famotsoran-keloka vao fifidianana
An-dalana tanteraka ny famahana ny krizy, raha ny sori-dalana farany navoakan’ny mpitarika ny mpanelanelana avy amin’ny Sadc, Ingahy Chissano. Anisan’ny fiovana lehibe amin’izany ny hoe famotsoran-keloka vao fifidianana...
Tsy maintsy hankatoavin’ny parlemantan’ny tetezamita ny lalàna momba ny famotsoran-keloka, ary tsy misy fifidianana azo atao raha tsy misy izay fankatoavana izay (And. 14). Izay no anisan’ny fiovana lehibe amin’ny sori-dalana farany navoakan’Ingahy Chissano, ny 16 febroary lasa teo. Mbola mitoetra ny hoe ny raharaha politika teo anelanelan’ny 2002 sy 2009 no hanomezana famotsoran-keloka, tsy fandravana fa fisokafana no hatao amin’ny Cst sy ny Ct ary ny Ceni (And.5). Vaovao kosa ny And. 24 : tsy misy fahazoana manakana na manala ny Filohan’ny tetezamita, na fitsipaham-pitokisana ny governemantan’ny tetezamita, na ny fandravana ny Parlemanta mandritra ny tetezamita. Tsy iray fiaviana amin’ny Faritany niavian’ny Filohan’ny tetezamita kosa ny Praiminisitra iraisana, ary tsy avy amin’ny antokon’ny maro an’isa miara-dia amin’ny Filohan’ny tetezamita koa (And. 3). Misahana ny fanaraha-maso ny asan’ny governemantan’ny tetezamita ny parlemantan’ny tetezamita (And. 7), ary mandany ny hitsivolana havoaka mandritra ny tetezamita ka avahina manokana amin’izany ny momba ny … (Suivre le lien)
HATEZERAM-BAHOAKA: "Atahorana", hoy ny Eveka
"Safomorona fa tsy voafehy ny onjan’ny fiainana, ka atahorana hipoaka ny hatezeram-bahoaka, ary hita taratra amin’ireny dina sy fitsaram-bahoaka tsy mandala lalàna ireny." Izay no voalazan’ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, taorian’ny fivoriambe teny amin’ny Episkopa, Antanimena, nandritra ny hateloana tamin’ny herinandro lasa teo. "Mampanahy ny zava-misy nefa tsy maintsy atrehina amim-pinoana, mahaketraka ny hasarotam-piainana na ny momba ny sakafo ho hanina isan’andro, na ny mikasika ny fanafody hitsaboan-tena, indrindra ny herisetra mampitebiteby isan’andro, ary eo koa ny loza voajanahary", hoy ihany ny fanambarana. Mahavelom-panantenana ny ezaka samihafa, fa tsy ilaozan’ny tsara sitrapo miezaka hanarina ny firenena ny eto amintsika.
Miantso ny rehetra mba hisaintsaina ary tsy hadino ny … (Suivre le lien)
Ravalomanana : tsy olonolom-poana !
Tsy tonga izy na dia nanantena izay tsy izy aza ireo tonga teny ivato,dia tsy hita na dia ny tendron’oron’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc aza tamin’y ny sabotsy teo « Ny nanantena tsy misy no sarotra fa ny mamoy mora foana »,hoy ny fitenenana.Dia izay tokoa ,fa setroka mandatsa-dranomaso no nandroaka ireo mbola tavela faramparany teo,tany ho any amin’ny fito ora hariva.
Avadiho indray ny pejy,ny fiainana mizotra ihany na eo izy na tsy eo,moa va tsy Madagasikara ihany Madagasikara ! Na ho inona endriny na ho inona ny fiaimpiainan’ny vahoaka eo aminy,izay ataon’ny mpitondra ihany no hamaritra ny momba azy.hoviana teto amintsika moa no mba nojerena akory ny hevitry ny vahoaka,tamin’ny alalan’ny valim-pifidianana teto,nandritra ny dimampolo taona izay,Mainka fa izay mba fihetsika na fidinana an-dalambe nilazany ny …(Suivre le lien)